सुन्य भो मन,हल्लियो मुटु, दर्दनाक दुःखको यो बेला
को वुझ्न पो सक्छ र यहाँ, दैवको निर्दयी खेला ।
चौधै महिना मात्र अघि उनी गईन, जिम्मा लगाई छोरी
आजै फेरि दोहरियो उही दिन, वग्यो आँशुको खोलि ।कति राम्रो परिवार थियो, कति थिए होलान् सपना
खायो भित्र भित्रै मनोरोगले, हराइ सवै चेतना ।
कठै ति अवोध मन त्यहाँ, अहिले के सोच्दै होलान्
वुझ्लान भोली, खोज्लान कति, सम्झेरै कति रोलान् ।आमाले छोडिगइन् त के भयो ? वावा संग मन वुझाएकै थिएँ
रित्तियो काख वावाको पनि आज, आजन्मै टुहुरा भैदिएँ ।
वाच्नु थियो पिडा लुकाई तिमी, दुई छोरीहरुको लागी गरेनौ निको वावा भैकन, जिन्दगी देखि भागी ।अवश्य आउथ्यो रात पछि दिन, एकैनास कहाँ हुन्छ र ?
सुखै सुख, खुशी नै खशीले सधै सधै कसलाई छुन्छ र ?
सायद होला पुर्नमिलन तिम्रो, स्वर्गैमा प्रिया सित
जानी जानी बालमनलाई तिमीले, दुःखसंग लगाई दियौ मित ।जस्को हुदैन कोहि भन्छन, भगवान सधै दाहिना हुन्छन
हाँसी खुसी वितोस ति, दुई परीहरुको जीवन ।
नदुखोस नानुहरुलाई, अभिभावक विहिन भै छाति हेर्ने छन जुनीभरी तिनले, जोडि तारा आकाश माथि ।गर्नु थियो हिम्मत तिमीले, आखिर परिस्थिती के चिज हो र ?
साथै थिए अनमोल रत्न तिम्रा, दिन काट्न के गारो थियो र ?
मुखै हेरि वाच्नु थियो तिमीले, हुर्काइ अमूल्य हिरा स्वर्गैवाट दिन्थिन आशिस, खुसी हुदै समिरा । (हाल – वाको, टेक्सास अमेरिका)Published on August 12, 2016 at 9:33 am Loading... यसमा तपाइको मत